Ogaden News Agency (ONA) – Tirinta Codadka Doorashadii Zimbabwe oo Socota.
Tirinta Codadka Doorashadii Zimbabwe oo Socota.
Dalka Zimbabawe waxaa ka bilowday tirinta codadkii la dhiibtay ee doorashada. Shacabka dalkaasi ayaa dooranayay madaxweynaha xiga iyo xildhibaanada barlamaanka ee dalkaasi, waxaana doorashadani codkooda ka dhiibtay dad aad u tiro badan.
Mucaaradka dalkaasi ayaa rajeynaya inay soo afjari doonaan mudada afartanka sano ah ee xisbiga ZANU PF uu ka talinayay dalka Zimbabwe. Kumannaan goob joogayaal caalami ah ayaa goob joog u ahaa doorashada Zimbabawe, waxaana ay noqoneysaa doorashadii ugu horeesay ee ka dhacda dalka Zimbabwe ee uusan ka qeyb gelin madadxweynihii mudada dheer soo maamulayay dalkaasi, Robert Mugabe.
Madaxa kooxda goobjoogayaasha doorashada ee Midowga yurub Elmar Brok oo ka hadlay qaabka ay u dhacday codbixinta ayaa sheegay in doorashadani ay aheyd mid nabad ah oo albaab dimuqraadiyadeed u furtay dalkaasi. Mr Elmar Brok ayaa waxaa kale oo uu sheegay in codbixinta goobaha qaar ay aheyd mid wanaagsan, inkastoo buu yiri meelaha qaar na aanan si wanaagsan loo qorsheynin doorashada.
Tartanka ugu weyn doorashada Zimbabwe ayaa waxaa la saadaalinayaa inuu u dhaxeyn doonto madaxweynaha imika talada haya ee Emerson Manangagwa oo matala xisbiga talada haya ee Zanu PF, da’diisu na ay tahay oo 75 jir iyo Nelson Chamisa oo ah ninka hoggaamiyo xisbiga mucaaradka ee MDC oo 40 jir ah.